Iskudeygii saddexaad 10kii sano ee la soo dhaafay Mudane Dhoobodaareed waa Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland – Radio Daljir
Iskudeygii saddexaad 10kii sano ee la soo dhaafay Mudane Dhoobodaareed waa Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland
Janaayo 4, 2019 9:53 g 0
Doorashadii Baarlamaanka cusub ee Puntland oo saaka ka bilaabatay aqalka baarlamaanka ee magaalada Garowe ayaa soo idlaatay xilli gaaban oo galabta ah. Doorashadaas ayaa waxaa lagu doortay Guddoomiyaha iyo labadiisa Kuxigeen, ayaga oo hagi doona, guddoomin doonana Baarlamaanka 5ta sano ee soo socota sida uu dhigayo dastuurka Puntland.
Baarlamaanka Puntland oo ka kooban 66 xubnood ayaa Guddoomiyaha Baarlamaanka u doortay Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobodaareed); halka Cabdicasiis Cabdillaahi Cismaan ay u doorteen Guddoomiye Kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka Puntland. Waxaa kale oo ugu dambayn la doortay Ismaaciil Maxamed Warsame, loona doortay Guddoomiye Kuxigeenka 2aad ee Baarlamaanka Puntland.
Guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Puntland Md. Cabdixakiin Maxamed Axmed ‘Dhoobodaareed’ Waa 50 jir, aqoontiisa sarena waxay ahayd culuumta siyaasadda. Muddo dheer wuxuu ahaa ganacsade, wuxuu ka soo shaqeeyey Warshadda Kalluunka ee Laasqorey iyo shirkadda Golis.
Mudane Cabdixakiin ayaa aakhirkii waxaa uu u weecday dhanka siyaasadda, isaga oo ka soo mid noqday Baarlamaanka markii ugu horraysay sannadkii 2009, waana markii 3aad oo uu ka mid noqdo golaha wakiilada Puntland, taas oo ka dhigan in uu leeyahay khibrad hawl Baarlamaan ah oo gaaraysa muddo 10 sano ah.
Dhoobodaareed waa markii 3aad ee uu u tartamo jagada Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland, waxaana markiisii koowaad ee tartankaasi ay ahayd 2014, xilligaasi oo laga guulaystay. Waxa uu haddana mar labaad uu isla kursigaasi guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland isku soo taagay, una tartamay sannadkii 2015, markaasi oo Baarlamaanku ay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii Baarlamaanka Siciid Xasan Shire oo muddo kooban xilkaasi hayey. Tartankaas mar kale Dhoobodaareed waa looga adkaaday.
Maanta oo ahayd markii saddexaad 10kii sano ee la soo dhaafay, Mudane Axmed Cali Xaashi (Dhoobodaareed) waxa uu si aqlibiyad ah ugu guulaystay in uu noqdo Guddoomiyaha cusub ee Golaha Wakiilada Puntland. Md. Dhoobodaareed waxa uu wareeggii labaad ee codbixinta ku helay 43 cod oo ka mid ah Baarlamaanka Puntland oo ka kooban 66 xubnood, halka musharraxii wareeggaasi labaad kula tartamayeyna oo ahaa CabdiJamaal Cismaan uu helay 23 cod.
Baarlamaanka Puntland ayaa haddana Guddoomiye Kuxigeenka koowaad waxay u doorteen Cabdicasiis Cabdillaahi Cismaan. Cabdicasiis waa nin dhallinyaro ah oo 33 sano jir ah. Waxbarashadiisii sare waxa uu ku qaatay Cilmiga bulshada, Shareecada iyo Qaanuunka madaniga ah, muddana wuxuu ku shaqaynayey qareenimo, isagoo ka tirsanaa bahda Garsoorka Puntland, aakhirkiina waxaa laga dhigay Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Degmada Bossaso. Cabdicasiis sannadkaan ayaa loo soo xulay in uu kamid noqodo Baarlamaanka Puntland, waxa uuna maanta ka sii mid noqday Guddoonka Golaha Wakiilada.
Guddoomiye Kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Puntland ayaa asna la doortay, waxaana loo doortay Ismaaciil Maxamed Warsame. Ismaaciil waxbarashadiisii sare waxa ay ahayd Shareecada iyo Qaanuunka, wuxuuna ka soo mid noqday Baarlamaankii kan ka horreeyey, isagoo xildhibaan ahna waxaa sannadkii 2014 loo magacaabay Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda Puntland, banneeyeyna xubintii golaha wakiilada.
Baarlamaanka cusub ee Puntland ee maantana doortay guddoonkooda waa Baarlamaankii 5aad ee Puntland ay yeelatoo tan iyo markii la asaasay sannadkii 1998. Waa Baarlamaan u badan dhallinyaro, misna sidaasi oo ay tahay badankoodu waa wajiyo ku cusub saaxada siyaasadda. 49 ka mid ah baarlamaanka cusub waa xildhibaanno cusub, halka 17 ay yihiin wajiyo hore, kana mid ahaa Baarlamaankii midkaan cusub ka horreeyey.
Inkasta oo baarlamaankaan uu wax badan ka baddelanyahay baarlamaanno ka horreeyey, loona tirinayo waxgalnimo aqooneed, mid hufnaaneed iyo tayaba, misna waa baarlamaankii tirada ugu yar oo haween ahi ay soo galeen tan iyo markii Puntland la dhidbay, waxaana wax haween ah kaga jira hal gabar oo kaliya, kana soo gashay gobolka Sool. 65ta xubnood ee kale ee xubnaha baarlamaanka Puntland cusub waa rag.
Radio Daljir waxa uu hoggaanka cusub ee baarlamaanka Puntland iyo dhammaan xubnaha baarlamaanka oo dhan ku dabagali doonaa ballanqaadyadii ay shacabka Puntland ka ballanqaadeen sannad-doorasheedka 2018-2019. Waxa aan il gaar ah ku eegi doonnaa in xubnaha baarlamaanka cusub ay ka hufanyihiin musuq, nin-jeclaysi iyo eex. Waxaan kale oo ku dabagali doonnaa sida ay u fuliyaan awoodooda xisaabtan ee xukuumadda cusub ee la dooran doono iyo tan hay’adaha kale ee dowliga ah. Waxa aan mar kasta fiiro gaar ah u yeelan doonnaa in hoggaanka cusub ee baarlamaanka Puntland uu noqdo mid ku milma xukuumadda ama se mid la xisaabtama.
Warbixin Xoghaya Guud ee QM oo ka Jawaabay Eedda Dowladda Soomaaliya